Red Hat Certification Guide - Overview & Career Paths | Ụlọ akwụkwọ ITS
Nduzi nke ndi nmalite ihe n'onu uzo
#1. Red Hat Engineer, Na-elekọta na Architect Certifications
#2. Red Hat Onye Nlekwa Nhazi System ma ọ bụ RHCSA
#3. Uhie okpu akwụkwọ injinia (RHCE)
#4. Uhie uhie mara onye na-agbazi akwụkwọ
#5. Onye Mmepụta Uhie Uhie na Onye Nchịkwa Ngwa
Uhie okpu ọrụ na ọrụ
Okpu Uhie, aha a ma ama na uzo nke IT, na-enye otutu ihe di iche iche n'oru ndi mmadu, nchekwa, igwe ojii na ndi enyi 'onwe ha bu ihe eji eme ihe. Ndepụta ndị a nwere oke egwu dị oke egwu site na ngwa ha dị iche na nke dị iche.
Ka ọ dị ugbu a, ihe karịrị 90% nke òtù Fortune 500 na-enwe ekele maka isi ihe nke mmemme mmeghe a na-emeghe. Ihe dị elu na-emesi uru nke oke okpu uhie okpu. Ndị ọkachamara na-akpọ Red Hat na-achọ ma na-akwụ ụgwọ ha site na òtù anụ ọhịa na ihe gbasara sekọnd.
Ọ bụrụ na ihe ndị a na ọrụ gbasara data agbasawo ịnụ ọkụ n'obi gị maka iche echiche banyere akwụkwọ ndị a? Onye ndu anyị nwere ike inyere aka:
Nke a na-enye ikikere, Uhie okpu, pụtara otu okwu iji meziwanye usoro nlekọta usoro na mmepe dị mfe. Akwụkwọ a na-ezubere iji kwekọọ na profaịlụ nke onye nlekọta usoro, ndị na-emepụta ihe, ndị injinia, na ụlọ ọrụ. Ọ na-elekwasị anya na nchịkwa ndị na-achịkwa ndị isi na-abụkarị ndị bara uru na ntọala IT ma na-ewere nduzi siri ike nke RHEL (Red Hat Enterprise Linux) mgbasa. Iji gosi ndị na-achọ ikike kachasị oke n'iji RHEL arụ ọrụ, asambodo ahụ chọrọ ezigbo itinye aka na ngwaọrụ na usoro. Ntọala dị ka Nchọpụta Nchọpụta Ọhụrụ na-achọpụta na ndị na-achọ ịbịakwute na-enweta ihe ọbụla aka na-aghọta na ezigbo Uhie okpu.
Aha aha ahụ nabatara nchịkwa Uhie okpu ahụ mgbe onye nyocha ahụ kpochara usoro mmezi ahụ ma mechaa nyochaa ihe ọkpụkpụ. Iji mee ka ule na-agagharị na nyocha, a na-atụ aro oke Uhie okpu na-akwadebe.
Mgbe ị ga-enwe mmeri nke Red Hat certification, ị ga-agwụrịrị ịbụ ezigbo onye Red Hat. E wezụga na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na ụgwọ ọrụ dị egwu, ị ga-agwụsị ịbụ onye a na-ahụ anya site na Uhie okpu mmadụ, ìgwè nke a maara maka ọdịmma ya. Ụkpụrụ Red Hat Linux ntinye aka site n'aka otu ụlọ ọrụ tụkwasịrị obi nwere ike inye gị niile.
Mmasị nke ndị ọrụ uhie Red, ndị isi oche na ndị na-ede akwụkwọ dị elu ma e jiri ya tụnyere ụfọdụ profaịlụ ndị ọzọ. Ịhụ ụdị mkpesa a, nzukọ ahụ emeela ka ọganihu nke akwụkwọ ntinye aka na ndị ọkachamara a dịka ọ dị. Achịcha 'Red Hat Certified' nwere ike iwepụ ya site n'aka ndị na-elekọta System, architects, Virtualization Administrators, Engineers na JBoss Administrator, na ihe ndị ọzọ., Site na ịgafe akwụkwọ ikike dị ịrịba ama. Ọzọkwa, ị ga-eburu ụda nke uhie na Uhie okpu na ịchọta Linux iche echiche na nyocha.
A na-atụ aro ịkwado ndị nchịkwa na-arụ ọrụ nke ọma, ndị nwere ike iwere égbè na Uhie okpu nke ọma. Ọzọkwa, a na-ele ya anya dị ka ụzọ mbụ ị ga-esi na-aghọ Red Hat Certified Engineer dị ka ọ dị mkpa ka ịnọdụ ala na RHCE Exam. EX200, nke bụ nyocha 150 nkeji, achọrọ ka ị kwụlite RHCSA.
Na ohere na ị na-eme ka Windows na-elekọta ọrụ gị, nhọrọ ndị ọzọ ịhọrọ bụ nchịkwa I (RH124) na II (RH134). Mgbe ọzọ, ndị na-ahụ maka nchịkwa Linux kwesịrị iwe RH199 dika Rapid Track Course.
Enweghị ihe mgbochi na ihe ọmụma na icheta eziokwu yiri nke ahụ, Red Hat Certified Engineer or RHCE certification appeared. Ọ bụ isi maka ndị isi na ndị ọrụ nchịkwa. Iji nweta asambodo a, onye ga-enwerịrị akwụkwọ ikikere RHCSA. RHCE na-akwadebe site na nhazi nke a na-eche na ọ bụ kpamkpam dịka ndokwa gị nke aptitudes ndị nweburu. Ọ bụrụ na ị bụ isi Windows na Linux zutere mgbe ahụ Red Hat System Administration I na II ọmụmụ bụ ihe ziri ezi maka gị.
Mgbe ọzọ, Linux / UNIX isi na ọrụ nke ihe karịrị otu afọ nwere ike ịga maka RHCSA Rapid Track Course ma ọ bụ RH199 na Red Hat System Administration III ma ọ bụ RH254 ọmụmụ.
Iji bụrụ ọkachamara RHCE gbaara agbazi, ị ga-ahụ site na 3.5 hour Linux 7 nke dabeere na RHCE Exam nke onye nyocha ya bụ EX300. Mgbasa ụlọ zuru ezu na-akwadebe site na aha a tụkwasịrị obi dịka nkwekọrịta nke Koenig ga-enyere aka mee ka nyocha nyocha ahụ dị n'otu.
Ntughari n'etiti ugwo akpu okpu okpu bu ugha RHCA. Mgbe ọ na-ahụ na ọ bụ ihe kachasị mma na arịrịọ, ọ na-ekwukarị ya dị ka akwụkwọ nyocha nke apex na Uhie Uhie. RHCE ma ọ bụ RHCJD bụ ihe ndị dị mkpa nke asambodo a.
Ndị asọmpi nwere ike ịhọrọ n'etiti klas ndị na-eso, mgbe ị na-aga maka RHCA:
Kweere ndị ọkachamara na JBoss Enterprise Middleware Application Platform, akwụkwọ ikikere a na-abata na mbido abụọ:
Maka Onye Mmepụta JBoss - RHCJD
Maka JBoss Nchịkwa - RHCJA
Ndị mmadụ ga-arụ ọrụ na ngwa Java Enterprise Edition (JEE) nwere ike ịga maka akwụkwọ ikikere RHCJD. Mgbe ọzọ, ndị nwere ike ịmebata na ilekọta Uhie okpu JBoss Enterprise Ngwa nwere ike ịga maka akwụkwọ ikike RHCJA.
Maka igwe ojii na-agbanwe agbanwe, òtù ahụ na-enye Ndenye Nchịkwa Nyocha Virtualization, tinyere akara aka igwe. Ndị ọkachamara nwere mmụta mmụta siri ike na ihe ọmụma yiri ya maka ihe eji eme ihe ike, ndị ọrụ, na ndị ọbịa na-eji Red Hat Enterprise Virtualization nwere ike ịga maka asambodo a.
Dika anyi kwuputara na ndi oru ugbo nile nke ndi oru ugbo Xune na-enyefe onu ogugu uhie uhie na mmeghe nke mmeputa, enweghi ugha maka uhie uhie gbaara ndi okachamara aka. Ndị ọrụ nchịkwa Red Hat na Linux engineer engine bụ ndị kachasị ọrụ profaịlụ maka ndị ọkachamara Uhie.
Uhie uhie Mgbasa ozi Linux bụ ihe ọhụrụ na-aga n'ihu na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke òtù na-edozi na nke a. N'ịbụ ndị na-amụta ihe gbasara Intanet Ndị na-arụ ọrụ na Kọmputa (ISCSI), nhazi ihe ọmụmụ dị iche iche na nchịkwa usoro, dịka ọmụmaatụ, Njikwa Nnyefe Njikwa (FTP), onye ọrụ nhazi Red Hat Linux bụ ntọala nke otu mkpakọrịta. Ha dị ezigbo mma ịmepụta ihe ngosi RHEL dị icheiche na oge. Ndị na-ahazi na-eche banyere ha dị ka akụ ha kachasị mma.
N'ụzọ dị otú a, họrọ taa maka nyocha ịchọrọ Red Hat na Linux ma bụrụ otu n'ime ìgwè dị otú ahụ dị elu.